Filmii Afaan oromoo qoree bultii!! -
Filmii Afaan oromoo qoree bultii!!
Aartii Afaan Oromoo Guddisuuf gummaacha keenya haa baanu!!! Yaada qofa kannachuun guddina Aartiitiif humaa hin godhu. Tanaaf gahee gama keenyaa bakka jirruu bahaachuun dirqama lammummaa haa ta’u!!!!!!
Previous Leenca DC Soccer Team Thanks Its Sponsors
Next Walgahii Tokkummaa Jaarmayoota Oromo Afranii, 2015 Minnesota